डिप्रेशनका साथ जिवित: मेरो निदान र उपचारको लागि यात्रा - समुदाय | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समाचार औषधि जानकारी, समाचार भारी खेल स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार प्रेस चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी, चेकआउट मनोरञ्जन कम्पनी, औषधि जानकारी कम्पनी कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कल्याण कम्पनी, समाचार
मुख्य >> समुदाय >> यो डिप्रेसनको साथ बाँच्न कस्तो छ: व्यक्तिगत निबन्ध
यो डिप्रेसनको साथ बाँच्न कस्तो छ: व्यक्तिगत निबन्ध
धेरै व्यक्तिको लागि भावनाहरू गैर-रैखिक हुन्छन्। खुशी र दिमागको शान्ति जस्ता राम्रा भावनाहरूको साथसाथै निराशा र उदासिनताको भावनाहरू पनि सामान्य हुन्छन्। डिप्रेसनले भावनाहरूको नियमित दायरालाई निराशाको असामान्य र दिगो अवधिमा बदल्न सक्दछ, जहाँ खुशीका क्षणहरू अस्तित्वमा हुँदैनन् - वा केहि र धेरै बीचमा। डिप्रेसनको साथ बाँच्ने मेरो अनुभव यहाँ छ।
एलिग्रा घ मा घ के हो
के डिप्रेसन जस्तो लाग्छ
मेरो प्रारम्भिक वयस्कतामा, म निराश, निराश र निरन्तर दु: खी महसुस गर्न थालें। के सुरुमा अफ-डे जस्तो देखिन्थ्यो हप्ताको पीडादायी भावनाहरूमा परिवर्तन भयो जुन उनीहरूले कहिल्यै हार मान्दैनन् जस्तो देखिन्थ्यो। मेरो उमेरका व्यक्तिसँग जीवनको आनन्द उठाउन गाह्रो थियो। डिप्रेसनले खास, दैनिक कार्यहरू बनाउँथ्यो - जस्तै दाँत माझ्नु — स्मारक जस्तो देखिन्छ। यो मलाई अदृश्य सा chain्ला जस्तो लाग्यो, मलाई ओछ्यानमा राखेर।
मलाई त्यतिखेर के थाहा थिएन त्यो थियो, मेरो छालाको र्गले मेरो यात्राको लागि यात्रा अझ चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्छ। शिकागो, इलिनोइस बाहिर लाइसेन्स प्राप्त क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक, लॉरेन ह्यारिस, साइराडी भन्छिन्, डिप्रेसनको साथ बाँच्नु कालो व्यक्तिहरूको लागि कठिन हुन सक्छ। कालो वयस्कहरू अन्य जातिहरूका वयस्कहरू भन्दा बढी डिप्रेसर लक्षणहरू रिपोर्ट गर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ ... र ... उपचार प्राप्त गर्ने सम्भावना कम, ह्यारिस भन्छन्। यो विभिन्न कारणहरूको लागि देखा पर्दछ, जस्तै जातिय भेदभाव, कलंक, र स्टीरियोटाइप जुन विशेष गरी काली महिलाहरू अरू जातिहरू भन्दा बढी दुखाइ सहन सक्षम छन्।
सम्बन्धित: Black प्रश्नहरू डाक्टरलाई सोध्नुहोस् यदि तपाईं कालो, स्वदेशी, वा रंगको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने
मेरो उदासिनताले मेरो शक्ति बढायो र मेरो मुडलाई धमिलो बनायो, तर त्यहाँ विभिन्न प्रकारका मुड डिसअर्डरहरू छन् - र लक्षणहरू सबैको लागि फरक हुन्छ। यस अनुसार मानसिक स्वास्थ्य को राष्ट्रीय संस्थान , केहि सामान्य स्केतले निम्न समावेश गर्दछ, जब तिनीहरू दिनभर रहिरहन्छन्, कम्तिमा दुई हप्ताको लागि:
लगातार दु: खी, चिन्तित, वा खाली मुड
निराशा, वा निराशा को भावनाहरु
दोषी भावना, बेकम्मापन वा असहायताको भावना
तपाईको गतिविधिमा रुचि वा खुशीको कमी तपाईले सामान्य रूपमा लिनु भएको छ
कम ऊर्जा वा थकान
थप बिस्तारै सार्दै वा कुरा गर्दै
अस्वस्थ महसुस वा बस्न समस्या भइरहेको छ
ध्यान केन्द्रित गर्ने, सम्झने, वा निर्णय लिन कठिनाई
कठिनाई निद्रा, बिहान सबेरै उठ्ने, वा बढी निदाउन
भोक र / वा वजन परिवर्तन (तौल घटाउने वा तौल लाभ)
मृत्यु वा आत्महत्या, वा आत्महत्या प्रयास को विचार
स्पष्ट वा शारीरिक कारण बिना दुखाइ वा पीडा, टाउको दुख्ने, वा पाचन समस्याहरू र / वा त्यो उपचारको साथ पनि सजिलो हुँदैन।
यदि तपाइँ यी संकेतहरू अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने, एक डिप्रेसन आकलनको बारेमा तपाइँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस्।
मेरो डिप्रेसनको उपचार गर्दै
मेरो निदान मानसिक स्वास्थ्य मुद्दाहरू र जातिय भेदभावको कारण अपेक्षित भन्दा बढी समय लाग्यो। डाक्टरहरूको एक श्रृंखलाले मेरो लक्षणहरू खारेज गर्‍यो र मलाई बलियो हुन पनि भन्यो, कि म पक्कै पनि नराम्रो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छु। मेरो लक्षणहरू झन् झन् खराब हुँदै गयो, र मैले महसुस गरें कि सब चीज सामान्य भए जस्तो गरी म जारी राख्न सक्दिन। मैले अन्ततः एक मनोचिकित्सकलाई देखे जसले मेरो चिन्तालाई गम्भीरताका साथ लिए र एक एन्टिडीप्रेसन्ट कल भने फ्लुओक्सेटीन (जेनेरिक प्रोजाक ), एक मनोवैज्ञानिक संग चिकित्सा संगै। सुरुमा, म योसँग सम्बन्धित कलंकको कारण एन्टिडिडप्रेसन्टहरू सुरू गर्न अनिच्छुक थिएँ।
करिब तीन हप्ता पछि — मैले नतिजा महसुस गर्न थालें। मेरो अत्यधिक उदासी र निराशाको गहन भावना बिस्तारै उठ्न थाल्यो र मलाई लाग्ने डर मलाई आफु चुप लागेन। मलाई चिन्ता लागेको थियो कि म फ्लाक्सोटाइनमा आफैं जस्तो कम महसुस गर्दछु, तर यसको सट्टामा पहिलो पटक, लामो समयमा — म आफैलाई बढी महसुस गरें र दिनभर कार्य गर्न सक्षम भएँ। उपचार प्राप्त गरीरहेको र स्वस्थ कपी। म्याकेनिज्म निर्माणले मलाई काम गर्न जारी राख्यो, जब डिप्रेशनल एपिसोडमा पनि हिट हुन्छ।
संज्ञानात्मक व्यवहार उपचार र औषधि बाहेक, त्यहाँ धेरै प्राकृतिक उपचारहरू छन् जुन डिप्रेसनका लक्षणहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ, टिफनी बाउडेन, पीएचडी, विविधता परामर्शदाता, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरका अनुसार। व्यायाम र एक स्वस्थ आहार विशेष गरी सहयोगी छन्, बोडेन भन्छन्। सेल्फ-केयर पथ, बोटबिरुवाको हेरचाह, अरोमाथेरापी, योग, संगीत, सकारात्मक साथीहरूसँग संलग्नता, कपालको हेरचाह, जनावरहरूको हेरचाह, र परिवार स्वस्थ सन्तुलनमा हुँदा परिवारको सबै महान समर्थन हो।
सरल र व्यावहारिक चरणहरू जस्तै यो मेरो लागि कार्य गर्दछ। बढी ध्यान दिएर हुन र यो क्षण मा उपस्थित रहन सिक्ने (भविष्य बारे बाहिर बाहिर) मेरो लागि धेरै निराशाजनक भावनाहरु कम गरिएको छ। दोहोरिने कामहरू, जस्तै कपालको देखभाल मेरो मनपर्ने संगीत सुन्दा, मलाई आत्म-शान्त पार्न र मेरा भावनाहरू मार्फत कार्य गर्न मद्दत गर्दछ। केही जडिबुटी सुगन्धहरूका साथ अरोमाथेरापी, ल्याभेन्डर जस्ता, मलाई शान्त गर्न मद्दत गर्दछ - र मेरो लागि प्राकृतिक उपचारको रूपमा डबल्स चिन्ता र अनिद्रा । यो द गो मा पनि उपयोगी छ। मसँग सुक्खा लैभेंडर वा लैभेंडर आवश्यक तेल मसँग बोक्दछु र यसलाई श्वास दिन्छु वा तत्काल शान्त प्रभावको लागि मेरो कलाईमा केहि ड्याब गर्दछु।
के तपाइँ योजना बी गोली लिए पछि सेक्स गर्न सक्नुहुन्छ?
डिप्रेसनको साथ बाँचिरहेका
मेरो डिप्रेसनको प्रबन्धको एक अंशले यसलाई स्वीकार गर्दैछ, जस्तो कि कुनै अन्य रोगको रूपमा। यो एक आजीवन निको पार्ने यात्रा हो जुन मेरो उपचार योजनामा ​​परिवर्तन आवश्यक छ, धैर्यता, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आफैलाई मायालु दया।
मेरा भावनाहरू, तनाव र ट्रिगरहरू बुझ्न सिक्दा मलाई मेरो लक्षणहरू प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्दछ। त्यो आत्म-सचेतनाले परिस्थिति, वातावरण, वा मेरो सर्पिललाई कम मुडमा शुरू गर्ने मानिसहरूलाई बेवास्ता गर्न सम्भव बनाउँछ। र जब ती घटनाहरू घट्छन् तब डिप्स प्रबन्ध गर्न सजिलो बनाउँदछ।
उदासीनता र उदासीनता सबैका लागि डरलाग्दो हुन सक्छ, तर थेरापी, औषधि, र होमियोपैथिक उपचारको संयोजनको साथ, म सामान्य जीवन बिताउन सक्षम छु।
त्यहाँ जो कोही डिप्रेशनको साथ बस्छन्, यो जान्नुहोस्: यो अन्त्य होइन, र तपाईं एक्लो हुनुहुन्न। धेरै १ million मिलियन वयस्क संयुक्त राज्यमा कम्तिमा एउटा प्रमुख डिप्रेशनको घटना भएको छ र २ 25 करोड वयस्कहरूले कम्तिमा दुई वर्षदेखि एन्टीडिप्रेसस लिइरहेका छन्। तपाईंको लक्षणहरूको अनुरूप प्रभावकारी उपचारको साथ, डिप्रेसन कुनै पनि अन्य स्वास्थ्य अवस्था जस्तै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
मद्दत वा उपचार वा उदासीन समर्थनको खोजीको बारेमा थप जानकारीको लागि, भ्रमण गर्नुहोस् मानसिक स्वास्थ्य मा राष्ट्रिय गठबन्धन वा कल गर्नुहोस् पदार्थ दुरुपयोग र मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रशासन 1-800-662-HELP मा हेल्पलाइन। तपाईं एक पियर समर्थन समूह पनि पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ । यदि तपाईं वा प्रियजनले आत्मघाती विचारहरू वा आत्म-हानि अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने, कल गर्नुहोस् राष्ट्रिय आत्महत्या रोकथाम लाइफलाइन १-8००-२73--8२255 मा वा नजिकैको आपतकालीन कोठामा जानुहोस्।
के २ turning मोडि turning तपाईंको स्वास्थ्यको लागि अर्थ हो
के यो मेरो ट्याब्लेट ठीक छ?
xanax को आधा पट्टी कति लामो हुन्छ?
काउन्टर मा कुकुरहरु को लागी एलर्जी औषधि
कटौती योग्य अधिकतम पकेट को बाहिर मा शामिल छ
के तपाइँ codeine र hydrocodone सँगै लिन सक्नुहुन्छ
यदि तपाइँलाई फ्लू छ भने तपाइँले खाना खानु पर्छ?
डिग्री सेल्सियस मा सामान्य शरीर को तापमान के हो
टाइप २ मधुमेह को लागी सामान्य a1c के हो?